Ezigbo: Njikwa Mmemme Na-akpaghị aka maka Ecommerce | Martech Zone
Ka azụmahịa n'ịntanetị na-aga n'ihu na-eto eto, ọkachasị n'oge a nke Covid-19, yana kwa afọ karịa oge ezumike, ụlọ ọrụ obere na midsize na-abanyewanye na ọgụ dijitalụ. Businesseslọ ọrụ ndị a na asọmpi na ndị egwuregwu gbara ọkpụrụkpụ buru ibu, dị ka Amazon na Walmart. Maka azụmaahịa ndị a ka ha nwee ike ịdị asọ ma na asọmpi, ịnwe usoro mgbakwunye mmekọ dị oke mkpa.
Martech Zone na-eji mmemme agbakwunye iji mezue mmefu ya na iji nweta ego ụfọdụ. Oge ụfọdụ, ọ nwere ike ịbụ ụgbọ na-enye ezigbo ego… mana ọtụtụ mgbe, ọ bụ ihe ịma aka. Achọrọ m ịkesa nyiwe na ngwaọrụ ndị metụtara ndị na-ege m ntị… mana achọghị m itinye ndị na-ege m ntị n'ihe egwu site na ịnwa ịre ngwaọrụ na ngwaahịa ha enweghị mmasị.
Mgbasa ozi Purple ewepụtala ngwa ọrụ mgbakwunye mmemme akpaaka, Zuo ezuo. Kwadoro site na teknụzụ ikike nke Purple na ezigbo oge, nghọta data na-eweta, nchọpụta mgbakwunye ọhụrụ, mbanye, na onyinye nsuso ezubere maka azụmaahịa ndị pere mpe na ọkara na ndị ọhụụ na ahịa mmekọ.
Mgbakwunye ahia bu otu n’ime oru oma eweputara na oru ntanetị nwere ike itinye aka na ya. Dollar maka dollar, mmekorita nke ahia bu uzo kacha enye uru maka ulo oru e-commerce. Mana nke bụ eziokwu bụ na ịgagharị na mgbakwunye ahịa adịghị mfe. E nwere ihe karịrị nde 1.2 ndị mmekọ na-arụsi ọrụ ike taa ma na-agụta, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu n’ime ha anaghị achụ ego bara uru. Anyị mepụtara Ezigbo iji mee ka ụlọ ọrụ ọ bụla nwee ike ịmepụta ma mepụta atụmatụ mgbakwunye data nwere mmetụta.
Kyle Mitnick, Onye isi ala nke Mgbasa Ozi Purple
Ebumnuche bụ ngwa ahịa mgbakwunye nke na-ejikọ ihe karịrị 10 nde ihe data sitere na ndị mmekọ mmekọ 87,000 gafere azụmaahịa azụmaahịa 23, gụnyere ngwa & ọla, uwe, ngwa elektrọnik, ahụike & mma, na ụlọ & ibi.
Ebumnuche zuru oke iji mepee egwuregwu ahụ ma nye onye ọ bụla nwere azụmaahịa e-commerce aka ịchịkwa atụmatụ azụmaahịa ha nwere na nghọta dị mkpa iji mee mkpebi mkpebi. Ezigbo, ndị nwe ụlọ ahịa na-enweta:
Top-irite Mgbakwunye Identification - Ọrụ a na - achọpụta ndị mmekọ kachasị elu nke azụmaahịa anaghị arụ ọrụ ugbu a. Yana edepụta ozi kọntaktị niile amaara, ọ na-enyekwa ndebiri ọrụ iji nyere aka ịmalite njikọ aka.
Nkwado Nkwado nke Commissions - Na-ụbọchị nghọta na ihe nkezi ọrụ ọnụego bụ maka onye ọ bụla Mgbakwunye vetikal. Ndị ọrụ nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na ha na-akwụ ụgwọ karịa maka mmekọrịta na otu ha kwesịrị isi gbanwee ọnụego ndị ahụ iji bulie ọganiihu.
Ọnwa Ọnwa gafere nke ọma - Ndị otu azụmaahịa na-enweta nghọta doro anya banyere otu mmekọ ọ bụla na-arụ, nke ndị na - eme nke ọma karịa ndị ọzọ, ebe enwere ndapụta, yana ọhụụ zuru oke banyere ọganiihu nke mkpọsa ahụ na ndị KPI.
Mgbakwunye Ahịa Atụmatụ na usoro - Ọbá akwụkwọ dum banyere otu esi eme mkpọsa ahịa mgbakwunye nwere ike ịga nke ọma. Maka ụlọ ọrụ na-ewere usoro a maka oge mbụ, ọ na-enyere mkpebi aka iji obi ike mee.
Ogologo oge gara aga bụ ụbọchị nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi igbe ojii. Jiri nwayọ, nyochaa atụmatụ uto nke ugbu a, nke akwadoro yana ịkwado mkpọsa na pịa bọtịnụ.
Gbalịa Nanị Maka Free
Tags: Njikọ mmekọMgbakwunye mmemmechọta ndị mmekọọcha
Gburugburu Ebumnuche: Azịza nke Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi?